Tra-tehaky ny polisy… : sokatra 200 nafenina tao anaty… vatam-paty | NewsMada
Tra-tehaky ny polisy… : sokatra 200 nafenina tao anaty… vatam-paty
Avy any Toliara, saika hihazo an’Antananarivo ity taksiborosy Sprinter iray no nosakanan’ny polisy teo Alakamisy Ambohimaha, Fianarantsoa, omaly maraina. Rehefa nosavaina, tsy razana no tao anaty vatam-paty fa… zana-tsokatra niisa 200 eo ho eo.
Mahita fika foana! Saron’ny polisy avy ao amin’ny commissariat Central Ampasambazaha Fianarantsoa tao Alakamisy Ambohimaha, omaly ny taksiborosy Sprinter iray avy any Toliara nitondra zana-tsokatra miisa 200 natao tanaty vatam-paty. Ho an’ireo olona mijery tampoka dia hoe faty lena tokoa no nentin’ilay taksiborosy, hay zana-tsokatra marobe. Nampiakarina tany ambony fitoeran’entan’ilay taksiborosy ilay vatam-paty misy sokatra, avy eo mody nasiana sainam-pirenena mari-pamantarana fa mitondra razana ilay taksiborosy. Tsy izany anefa ny zava-nitranga fa zana-tsokatra nokasaina haondrana an-tsokosoko no tao anatiny fa tsy fatin’olona araka ny noeritreretin’ny rehetra nandritra ny fisavana nataon’ny polisy. Na ireo mpandeha tao anatin’ity taksiborosy ity aza samy tsy nisy nanampo na inona na inona hoe mitondra sokatra ilay fiara fa nihevitra ny rehetra fa mitondra razana tokoa no miaraka amin’izy ireo. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy, avy any Toliara hihazo an’Antananarivo ity taksiborosy ity kanjo izao tratra tao Alakamisy Ambohimaha izao. Nahazo loharanom-baovao mialoha ny polisy momba ny fisian’ity taksiborosy mitondra zana-tsokatra anaty vatam-paty ity ka noraisim-potsiny.
Nosavaina ny mpandeha rehetra…
Hatairana ny an’ireo mpandeha tao anaty fiara nahita ireo polisy nanakana ilay taksiborosy ka nampidina ireo vatam-paty nanao fisavana ny tao anatiny. Karazan’ireo zana-tsokatra ahina ho lany tamingana any amin’ny faritra atsimo ireto tratra tao anatiny nolazaina fa razana ireto. Navoaka tao anaty fiara ny mpandeha ka niroso tamin’ny fisavana azy ireo koa ny polisy. Hatramin’ny omaly, mbola tazonina anaovana fanadihadiana ao amin’ny kaomisaria Fianarantsoa ny mpamilin’ilay taksiborosy nitondra ity vatam-paty feno sokatra ity.
Mihaavolenta hatrany ny fomba fiadin’ireo tambajotra mpanao trafikana sokatra miainga avy any atsimo. Fahita hatramin’izay, fatorana scotch mba tsy hihetsiketsika ireo biby mialoha ny hanafenana azy miaraka amin’ny entana. Izao mahita hirika entina amin’ny vatam-paty indray dia mody lazaina hoe mitondra razana. Midika izany fa ambony ny tolotra momba ireny trafikana sokatra ireny matoa mitady ny fomba rehetra ahafahana mamoaka ireny sokatra ireny avy any atsimo ireo mpanao trafika. Tsy mety ho fongana mihitsy ity resaka trafikana sokatra ity. Misy ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny fanenjehana ireo mpanao trafika, saingy tsikaritra kosa fa misy ireo “sokatra be” ambany latabatra mandady sy miray tendro amin’ireo mpanao trafika any atsimo. Misy aza efa mandady any anaty fiaramanidina hiondrana any ivelany vao tratra ireo sokatra sasany nefa mandalo “scanner” avokoa ny entan’ny mpandeha rehetra eny amin’ny seranam-piaramanidina.
Tsy azo antoka intsony izany izao ireny taksiborosy mitondra razana ireny satria mety tsy ho razana intsony ny ao anatiny fa izao iaraha-mahita izao.
Tazonina ao amin’ny polisy ao Fianarantsoa ireo zana-tsokatra tratra ireo mialoha ny hamerenana azy any atsimo. Mitohy kosa ny fanadihadiana.